Semi otomatiki vatengesi uye fekitori - China Semi otomatiki Vagadziri
16 × 24 T-shati Sublimation Heat Kutamisa Muchina Muchina
Pisa muchina wekudhinda uyo unogona kushandiswa kudzvinya hembe nezvimwe zvinhu chero bedzi iri yakati sandara. Inoshanda nekushandisa magetsi kupisa iyo yekudziya kumusoro, uye kana zvadzikiswa zvinomanikidza iyo T-shati / zvimwe zvinhu zvine simba uye kugadzira yekudhinda inki, plastisol, rabha, sublime, chinjana bepa, polyflex, nezvimwe zvinonamira zvakanaka kune hembe zvinhu .
70 × 90 Huru Huru Jersey Sublimation Yakapetwa Inoshandisirwa Heat Press Kutamisa Muchina
70 × 90 Heat muchina wekudhinda uyo unogona kushandiswa kudzvanya sublimation shati, juzi nezvimwe zvinhu chero bedzi iri yakati sandara. Iko kutarisisa uye chinzvimbo che locator zvinogadziriswa uye zvakanyatso nyatso. Kudzora kwakaringana kwetembiricha uye nguva. Iyo dhizaini dhizaini uye nyore kushandisa.
Dhijitari Swing Kure Dhiviri Worktale T-shati Heat Press Machine
Chishandiso chakangwara uye kuratidzwa kwedhijitari kwetembiricha uye nguva, iyo kuverenga kuverenga tembiricha kushivirira iyo iri + -2 ° C. Nyore kubata, nyore kuronga uye nyore kushandisa. Kana chitoro chako chiine mazana ekudzvinyirira kuti uite muzuva rimwe chete, iwe unozoona zvakanakira zvinopihwa nemuchina uyu. Uchishandisa chinenge chegumi cheesimba sezvawaimboita nemuchina wenguva dzose, iwe unozokoshesa kudzikiswa kwesimba pamaoko ako nemapfudzi.
Yakakura Fomati Jersey Double Inoshandisika Heat Press Machine
Pisa muchina wekudhinda uyo unogona kushandiswa kudzvinya hembe nezvimwe zvinhu chero bedzi iri yakati sandara. Inoshanda nekushandisa magetsi kupisa iyo yekudziya kumusoro, uye kana zvadzikiswa zvinomanikidza iyo T-shati / zvimwe zvinhu zvine simba uye kugadzira yekudhinda inki, plastisol, rabha, sublime, chinjana bepa, polyflex, nezvimwe zvinonamira zvakanaka kune hembe zvinhu . Ichi chigadzirwa chine pneumatic ficha saka inogona kuburitsa yakasimba uye chaiyo kumanikidza kubva kumhepo compressor.
Pneumatic Yakakura Fomati Kupisa Muchina Muchina
Pisa muchina wekudhinda nechengetedzo unodzivirira mudziyo kuti udzivise kukuvara uye inogona kumisa iyo yekupisa ndiro kuti utsike pasi kana chinhu chikaitika kamwe kamwe. Tora bhodhi redunhu rakabatanidzwa, magetsi emagetsi, on-off timer, yakagadzikana, inoonekwa uye yakanyatsoita mushe. Inoshandiswa zvakanyanya kuburitsa T-shati, machira edhayi, mureza, mureza nezvimwe zvese mhando yezvinhu zvemachira zvinoda dhayi.
Pneumatic Yakakura Fomati Kupisa Yekuchina Machine
Tora nzira yepamusoro yakatakura nzira yekutsvedza, yakasimba, inoonekwa uye yakanyatsojeka. Maitiro acho anodzorwa nedhijitari uye anoshandisa chiratidzo chiratidzo uye simba remhepo rinoparadzira averagely.Chishandiso chakangwara uye kuratidzwa kwedhijitari kwetembiricha uye nguva, iyo readout tembiricha kushivirira iyo iri + -2 ° C. Nyore kubata, nyore kuronga uye nyore kushandisa.
Pneumatic Logo Kaviri Zviteshi Heat Press Machine
Double chiteshi pneumatic chitaridzi muchina wekudhinda kupisa kupisa kuita kwe350 ° c pasina kukanganisa, maka gilding muchina unofanirwa kudhinda machira logo ezvakasiyana maratidziro, ane mhedzisiro.
Pneumatic Maka Chinyorwa Heat Heat Machine
Pneumatic rosin yekudhinda muchina kupisa kupisa kuita kwe350 ° c pasina kukanganisa, maka gilding muchina unofanirwa kudhinda machira logo ezvakasiyana maratidziro, ane mhedzisiro